Yakapofumadza Bofu Rivet Fekitori - China Yakasviba Bofu Rivet Vagadziri, Vatengesi
Yakajairwa Bofu Rivet
Yakakosha Bofu Rivet
Flat Musoro Wakazara Hexagonal Muviri Rivet Nut sumo
CSK Musoro Wakavhurika End Rivet Nut
Vhura Ekupedzisira Flat Musoro Knurled Muviri Blind Rivet Nut
Flat Musoro Cylindrical Rivet Nut
Kaviri Core Kubvisa Ruoko Riveter Sumo
Ruoko Rwega Riveter Pfuti Sumo
Aluminium Simbi Dome Musoro Bofu Rivet
Iyo aluminium dome bofu rivet yakasimba, mhando nyowani yekutsanya yeakasiyana siyana ekushandisa.
Yakagadzirwa yemhando yepamusoro aruminiyamu chiwanikwa, haimbomhanyisa, ine yakanaka ngura kuramba, Iyo yakasimba, isina huremu, uye yakasimba.
Yakazara Simbi Dome Musoro Bofu Rivet
Rivets ndeyekusingaperi, isina-tambo yakasungirwa inosunga zvinhu pamwechete. Izvo zvine musoro uye shank, iyo yakaremara nechishandiso chekubata rivet munzvimbo. Rivets mapofu anewo mandrel, iyo inobatsira kuisa iyo rivet uye kutyoka mushure mekuiswa.
Yakazara Aluminium Dome Musoro Bofu Rivet
Yakazara Aluminium Dome musoro bofu rivet ine yakakwira plastiki, yakanaka kuneta kuramba, uye yakaoma uye yakaoma.Iyo iri nyore kushandisa, yakajeka uye hunyoro husingagumi.
Dome Musoro Bofu Rivet Isina Simbi
Aya maRivets akagadzirwa neiyo Yakakwira mhando Simbi Isimbi inova imwe yemhando dzepamusoro dzesimba rekumisa ngura, ichiita kuti igare kwenguva yakareba kupfuura dzimwe Hardware pamusika nhasi.
Yedu Hardware yakasimba kwazvo uye yakanaka kune ese emukati nekunze mashandisirwo. Stainless rivets akakurisa kune akajairwa simbi uye inopa yakanakisa ngura kuramba mumunyu kunyorera mvura
Aluminium Dome Musoro Bofu Rivet Nemusoro Wakakura
Ichi chigadzirwa ndeye yakavhurika kumagumo bofu rivet.Zvigadzirwa zvedu hazvina burrs. Musoro wembambo wakakwana, wakatsetseka uye wakatwasuka. Iyo yekumisikidza mhedzisiro yakanaka uye chimiro chakaumbana. Chigadzirwa chacho chinodziya ngura, ngura uye yakasimba. Iine huwandu hwakasiyana hwekushandisa.
Yakazara Simbi Dome Musoro Bofu Rivet Nemusoro Mukuru
Iyi dome musoro bofu rivet zvigadzirwa zvakagadzirwa nesimbi. Inogona kuve yakasimba, kushushikana-kusununguka, kusununguka uye kuita mufashoni. Iyo ine yakakwira mapurasitiki, yakanaka kuneta kuramba, uye yakaoma uye gobvu. Uye inogona kuiswa kuminda dzakasiyana.
Dome Musoro Bofu Rivet Iine Ruvara Kupenda
Inopa kugona kwakabatanidzwa kusunga chinhu panguva yegungano uchisimudzira chitarisiko chayo. Imwe nzira yekuvandudza kana kugadzirisa kutaridzika kweiyo rivet kuwedzera ruvara nekupenda. Chigadzirwa chedu chakakodzera kune akasiyana mafomu ekushandisa uko ruvara rwunowedzerwa kana kuenzaniswa.
Aluminium CSK Musoro Bofu Rivet
Zvigadzirwa zvedu zvakanaka mukushanda, nyore kuponesa, uye kunyatso kudzora mhando. Iyo ine yakatsetseka pamusoro, isina ngura kuramba, kushushikana kwakanaka uye yakasimba kumanikidza.
Yakazara Simbi CSK Musoro Bofu Rivet
Isu tiri mutungamiri wehunyanzvi mugadziri wemapofu rivets muChina, Zvigadzirwa zvedu zvakanaka mukushanda, nyore kuponesa, uye kunyatso kudzora mhando. Iyo ine yakatsetseka pamusoro, isina ngura kuramba, kushushikana kwakanaka uye yakasimba kumanikidza. Iyo yekumisikidza mhedzisiro yakanaka uye chimiro chakaumbana.
Yakazara Stainless Simbi CSK Musoro Bofu Rivet
Iyo countersunk rivet chikamu chakamisikidzwa neicho chayo deformation kana kupindira kubatana. Iyo screw musoro yakanyatsonyura kana zvishoma kunyura muchikamu chakabatana. Ichi chimiro chinowanzo shandiswa mukushandisa uko iko iko hwakati sandara uye hwakatsetseka, senge pamusoro pechiridzwa.
Wuxi Yuke Environmental Sayenzi & technology Co., ltd.